कहिलेसम्म पर्खने ? |
कहिलेसम्म पर्खने ?
प्रकाशित मिति :2016-08-31 12:02:19
काठमाडौं । ‘म त चार वर्षको थिएँ नि ! राती एकबजे बाबालाई लगेको रे, आमाले भन्नुहुन्छ ।’ बर्दियाकी शान्ती चौधरीलाई बाबाको अनुहार पनि राम्रो याद छैन । उनका बुवा रामदिन चौधरीलाई २०५८ सालमा माओवादीको आरोपमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको बताउँछिन् ।
पन्ध्र वर्षीया शान्ती बेपत्ता परिवारको पीडालाई मण्डला नाटक घरमा नाटकीय स्वरुप दिईएको प्रस्तुती हेर्न र बुवाको खोजी गर्न काठमाडौं आएकी हुन् । बुवा बेपत्ता हुँदा बर्दियाकै ऐश्वर्या २ वर्षकी थिईन् । उनी पनि आफ्ना बुवा कहाँ छन् भनेर खोज्न आएकी हुन् । यो भन्दा अघि उनकी आमा खोज्न हिँड्थिन् । कसैले उनको बुवा कहाँ छन ? जवाफ दिएनन् । अब ऐश्वर्य हिँड्दै छिन् आफ्ना बुवाको खोजी गर्न ।
कहिलेसम्म पर्खने ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वरिवारले पर्खेको बर्षको पात्रो
आफन्त र परिवारलाई विना कसुर वेपत्त्ता पारिँदा उनीहरू चरम पीडा भोग्न बाध्य छन् । सरकार फेरिरहन्छ । तर, उनीहरूको प्रश्न जहाँ को त्यहीँ । कसले उत्तर दिने हो ? उनीहरू अलमलमा छन् । किन वेपत्ता पारिए ? कसैलाई थाह छैन । कसैको सिरानीमा रातो किताव भेटेर लगिए, कोही एक छिन कुरा गर्नुछ भनेर लगिए । बिभिन्न वहानामा लगिएका उनीहरू फर्केर आएनन् । परिवारले उनी गएको बाटोमा आँखा ओछ्याउन अझै छोडेको छैन ।
यसरी लगिएकाहरू जिउँदा छन वा मरिसके परिवारलाई केही पत्तो छैन । परिवार आशैआशमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको घडीमा समय उल्टो चलिरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर तयार पारिएको नाटक ‘आधा सत्य’ मण्डला नाटक घरमा मञ्चन भयो ।
राज्य र माओवादी पक्षबाट विभिन्न आरोपमा बेपत्ता बनाईएकाको परिवारको पीडा र आशालाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा कलाकारले ‘आधा सत्य’ नामक नाटक मञ्चन गरेका हुन् । नाटकलाई राजन खतिवडा र सिजन दाहालले लेखेका हुन् भने निर्देशन राजन खतिवडाले गरेका हुन् ।